Nayakhabar.com: डन्डीफोरले सतायो ? यसरी हटाउनुहोस्
डन्डीफोरले सतायो ? यसरी हटाउनुहोस्
काठमाडौं । सुन्दर र चम्किलो छालाको चाहना हरेक महिलालाई हुन्छ। तर, अनुहारमा आउने डन्डीफोरले तपाईंको सुन्दरतामा दाग लगाइदिन्छ। डन्डीफोर छिटै निको पनि हुँदैन। केही घरेलु उपाय अपनाएर डन्डीफोरबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।